रुकुम घटनामा किशाेरीकाे चरित्र हत्या भयाे: रेखा थापा
फरकधार / २२ जेठ, २०७७
अभिनेत्री रेखा थापाले रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकामा भएको घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई सजायको माग गर्दै हत्या गरिएका नवराज विश्वकर्माकी प्रेमिका भनिएकी किशोरीको चरित्र हत्या नगर्न अपिल गरेकी छिन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट लेख्दै उनले घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई सजायको माग गर्दै नवराज विश्वकर्माकी प्रेमिका भनिएकी किशोरीको चरित्र हत्या नगर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
‘रुकुम घटनाका दोषीमाथि सजाय र पीडितलाई न्याय दिइयोस्,’ उनले लेखेकी थिइन्, ‘यस घटनामा जोडिएकी किशोरीको चरित्र हत्या र नारी अस्मितामाथि व्यंग्य गर्ने काम भएको छ । त्यसले उत्पीडित वर्गमाथि प्रहार भएजस्तो लाग्छ । अन्तर्जातीय प्रेम गर्ने साहस भएकी किशोरीको चरित्र हत्या गरेर न्याय हुन्छ ?’ उनले किशोरीको चरित्र हत्या गरेर पीडितले न्याय नपाउने तर्क गरेकी थिइन् । ‘नेपालमा केटीको उपमान गरेर न्याय पाउने हो ?
केटीको पेटीकोट समातेर विद्रोह हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘मानसिक हिंसा भएकाले ती किशोरीले नदीमा हाम्फाले जवाफदेही को हुन्छ ? किशोरीको चरित्र हत्या गरेर न्याय पाउने भने भोलिका दिनमा कुनै पनि छोरीले कसैलाई माया गर्ने छैनन् ।’
प्रकाशित मिति : जेठ २२, २०७७ बिहीबार २०:५६:१२,